1aviagem.com - Atụmatụ, mkparịta ụka, akụkọ ndị otu onye na-amanye oge mbụ kwuru
Netwọk mmekọrịta anyị
United Kingdom, Ala nke 5am tii na ebe ịgaghị anọ ọdụ!
Taa, anyị ga-ekwu maka UK, mba amaara ya tii elekere ise nke mgbede, abịakwala ọdụ! Mgbe m rutere London site na Heathrow International Airport na njem mbụ m na UK, ọ ga-ekwe omume ịhụ ihe dị mma maka ndị njem nleta. Ejikọtara ọdụ ụgbọ elu na ụzọ ụgbọ oloko. Ma ebe…
GỤKWUO United Kingdom, Ala nke 5am tii na ebe ịgaghị anọ ọdụ!
Belgium - ezigbo obodo iji gụọ ndị na-atọ ọchị, ebe ha na-a beerụ biya ma na-eri chọkọletị
Taa, anyị ga-ekwu maka Belgium, obodo gbasara ihe ọchị, biya na chọkọletị. Echere m na ịgụ ihe ahụ na-atọ ụtọ! Na njedebe anyị ga-enwe ihe ijuanya (naanị maka ndị Brazil, maka ugbu a). Antwerp - isi obodo diamonds Ebe dị mma ịga Belgium. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ana m akwado ụgbọ oloko, n'ihi na ugbua na…
GỤKWUO Belgium - ezigbo obodo iji gụọ ndị na-atọ ọchị, ebe ha na-a beerụ biya ma na-eri chọkọletị
Onu ogugu Nobel ka nne gi kwesiri? - Ezinaụlọ Curie guzobere opekata mpe 2 - Poland na France
N'ụbọchị nne a, achọrọ m ịjụ ajụjụ na-esonụ: Onu ego Nobel ka nne gị kwesịrị? Echere m na naanị maka inye anyị onyinye nke ndụ, o kwesịrị onye, ​​nke ọzọ na-abịa maka ịkwado anyị ruo mgbe anyị ga-enwe obi ike wee jiri ụkwụ anyị. Ezigbo ezinụlọ Curie guzobere ma ọ dịkarịa ala 2…
GỤKWUO Onu ogugu Nobel ka nne gi kwesiri? - Ezinaụlọ Curie guzobere opekata mpe 2 - Poland na France
Ihe kpatara ụlọ ọrụ ndị Brazil kwesịrị iji rube isi na echiche ESG - Environmental Social Governance, na otu ọ ga-esi baara onye ọ bụla uru.
Kedu ihe bụ ESG? Ebumnuche nke ESG bụ nguzozi n'etiti njem ahụ: Gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na azụmaahịa azụmahịa. N'ime ajụjụ ndị a, anyị nwere ike igosipụta otu esi eme ya: Gburugburu ebe obibi: Ajụjụ gbasara gburugburu ebe obibi gụnyere: mgbanwe ihu igwe, akụ ndị sitere n'okike, mmetọ, mkpofu na ụdị obibi ndụ dị iche iche. Social: Na-elekọta mmadụ criterion anyị nwere ike mata: mmadụ isi obodo, na-elekọta mmadụ ohere,…
GỤKWUO Ihe kpatara ụlọ ọrụ ndị Brazil kwesịrị iji rube isi na echiche ESG - Environmental Social Governance, na otu ọ ga-esi baara onye ọ bụla uru.
Njem mbụ ị gara Austria - Mba nke gbanwere ụwa - Vienna
Na-eji kwarantaini (n'ihi COVID-19) imelite blog. Cheta, ọ bụrụ na ị na-apụ, yikwasị ihe mkpuchi, ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịgba ọgwụ mgbochi na irube isi n'iwu gbasara ahụike. Mgbe anyị kwuchara nke a, ànyị ga-aga Austria? Chọ ịmata Ihe mbụ ị ga-eburu n’uche bụ na n’Ọstria asụsụ ndị isi bụ German. Ma kwụsị ...
GỤKWUO Njem mbụ ị gara Austria - Mba nke gbanwere ụwa - Vienna
Netherlands? Standardkpụrụ dị elu nke Holland na iche iche
Na -eji uru nke kwarantaini, ka imelite a blog a obere ihe. Ezigbo echiche bụ ịtụle ọba foto ahụ. Na nyochaa ya, nke nwere ike ịbụ "njem na ọdịnihu", na mbara igwe ọdịbendị! Ee, taa, anyị ga-ekwu maka Holland, mba na-akụzi ọtụtụ nkuzi n'ihe niile. Holland bụ…
GỤKWUO Netherlands? Standardkpụrụ dị elu nke Holland na iche iche
Njem mbụ ị gara Lithuania - Vilnius - Seehụ ezigbo ndị enyi
Gịnị kacha masị m? Iji zute enyi m si Belarus, bụ onye, ​​ọbụna dị ime, gafere ókè ahụ iji hụ enyi ya ochie nke Brazil ọzọ, nke a bụ ahụmịhe pụrụ iche. Ọ ka na-ewetakwa ọtụtụ onyinye! Ntụtụ na mpempe akwụkwọ ozi si Minsk, na ụfọdụ ụmụ bebi si Belarus maka chi. (Oh na kuki…
GỤKWUO Njem mbụ ị gara Lithuania - Vilnius - Seehụ ezigbo ndị enyi
Gịnị kpatara Prague ji bụrụ otu ebe kachasị mma iji nọrọ Halloween? - Czech Republic
Anyị maara na a na-ahụta Ọktọba 31st dị ka Hallowen, ma ọ bụ, Halloween, ezumike nke na-abụbeghị akụkụ nke kalenda Brazil, ma a na-eme ya n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. N'ebe a na Brazil, anyị nwere 02 nke November, ezumike na ụbọchị ndị nwụrụ anwụ. Ma gịnị kpatara Czech Republic…
GỤKWUO Gịnị kpatara Prague ji bụrụ otu ebe kachasị mma iji nọrọ Halloween? - Czech Republic
Gịnị ka ndị Maya na ndị Aztek na-akụziri anyị gbasara ọrịa a na-efe efe? - Mexico
Ndị Mayan na ndị Aztek, ọbụna mgbe ọtụtụ narị afọ gasịrị, ka na-akụziri anyị ọtụtụ ihe! Ọ bụrụ na anyị lelee ntakịrị akụkọ ihe mere eme, anyị nwere ike ịmụ ma ghara ịmeghachi mmejọ ụfọdụ. Have nwetụla mgbe ị na-eche ihe kpatara ndị Europe ji chịrị America na ọ bụghị n'ụzọ ọzọ gburugburu? Ọfọn, ọ bụrụ na ị zaa ajụjụ a site n'ikwu na ọ bụ n'ihi na…
GỤKWUO Gịnị ka ndị Maya na ndị Aztek na-akụziri anyị gbasara ọrịa a na-efe efe? - Mexico
Gịnị mere ala Santa ji jụọ oyi? - Finland - Helsinki
Amaara m na a ka nwere ntakịrị tupu Christmas, mana achọrọ m ide banyere ala Santa Claus na gịnị kpatara ị ga-eji kwuo maka njem mbụ m ebe ahụ? Ya mere, ka anyị kwuo ntakịrị gbasara ndị Finns, ndị a na-arụ ọrụ nke ọma ma na-akwado. Kedu ka m si banye Finland? My mbụ…
GỤKWUO Gịnị mere ala Santa ji jụọ oyi? - Finland - Helsinki
Uzo esi aga na Qatar Airways, na ọdụ ụgbọ elu Doha.
Kedụ ka ọ ga esi efe Qatar Airways? You maara ohere ahụ dị na ndụ gị na enweghị ike ịmeghachi ọzọ? Nke ahụ ziri ezi, nke a bụ njem mbụ m na Qatar Airways. Ihe odide ahụ adịlarị njikere maka Asia, mana n'ihi ịmanye ike ọ gaghị ekwe omume mezue ikuku, nke which
GỤKWUO Uzo esi aga na Qatar Airways, na ọdụ ụgbọ elu Doha.
Uruguay mba dị iche na South America. - Montevideo
N'iji ohere efu na kwarantaini a, ekpebiri m ịhụ foto site na njem ochie na… Achọpụtara m na m nwere ọtụtụ ihe iji melite blog karịa ka m chere. Ya mere, taa, m ga-ekwu ntakịrị banyere Uruguay. Obodo dị ezigbo iche na South America, n'ihi gịnịkwa? N'ihi atumatu ha na ọha. Na…
GỤKWUO Uruguay mba dị iche na South America. - Montevideo
Ajụjụ ọnụ nke onye Brazil, kedụ ka ahụmịhe nke mgbanwe si eme? - Firenze - .tali
Kedu ka ahụmịhe nke Exchange? Taa, anyị ga-ewetara gị ntakịrị ihe ahụmịhe nke ịmụ mba ọzọ. Iji mee nke a, m ga-atụkwasị obi na enyemaka Thereza. Ezigbo, anyị zutere mgbe ọ bịara Brasilia ime emume ncheta ọmụmụ nwanne ya nwanyị. Enye abuana ke “Science enweghị ala” mmemme ma nwee nnukwu…
GỤKWUO Ajụjụ ọnụ nke onye Brazil, kedụ ka ahụmịhe nke mgbanwe si eme? - Firenze - .tali
N'aka ekpe na echiche ziri ezi, gịnị kpatara na ọ gaghị enwe ike ịkọwapụta akụkụ ị nọ?
N'oge na-adịbeghị anya na Brazil, e nweela ọtụtụ okwu banyere agha echiche echiche, n'etiti ndị na-eche n'ụzọ "ziri ezi" megide ndị na-eche "karịa aka ekpe". Ma ị maara ihe okwu ndị a pụtara? Tupu anyị amalite, ka anyị hụ ebe okwu ndị a si. Mmalite aka ekpe na aka nri.…
GỤKWUO N'aka ekpe na echiche ziri ezi, gịnị kpatara na ọ gaghị enwe ike ịkọwapụta akụkụ ị nọ?
Shoppingzụ ahịa na Ciudad Del Este kwesịrị ya? - Paraguay
Ezi ndị bekee, ebe anyị nọ iche, ekpebiri m inyocha ụfọdụ foto ochie na etiti ha ahụrụ m ụfọdụ njem mbụ m na Paraguay. Echere m: Chei, ha na-ekwu obere ihe banyere Paraguay, gịnị kpatara na agaghị m ekwu ntakịrị banyere ya? Na nke a bụ nsonaazụ. Ebee? Paraguay dị na South America ...
GỤKWUO Shoppingzụ ahịa na Ciudad Del Este kwesịrị ya? - Paraguay
Ọpụpụ - Brasilia - Brazil
E nwere 10.114 nwụrụ na 09/05/2020 (ma na-ebili), ndị a naanị n'ihi COVID-19. Onye ahụ a na-emejọ agagogoro ndị chọrọ ịhụ elu nke ụzọ ahụ? Kedu otu ị ga - esi chekwaa akụnụba ya na ndị ọrụ nwụrụ anwụ? Kedu ka ị ga - esi dọta ndị na - etinye ego na mba ofesi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ ha na onwu? Ha…
GỤKWUO Ọpụpụ - Brasilia - Brazil
-Zọ njem ụbọchị atọ maka Bariloche - Argentina
3zọ njem ụbọchị atọ maka Bariloche - Argentina Na oge a nke ichepụ ihe ọ bụla dị mma karịa ị na-ewere album ochie ma na-elele foto. Nke mere ka m laghachi na njem mbụ m gara Bariloche, nke dị na Argentina. Anọ m naanị ụbọchị 3 n'obodo ahụ, ma jisie ike ijide ọdụ abụọ. Anyanwụ na snow. NA…
GỤKWUO -Zọ njem ụbọchị atọ maka Bariloche - Argentina
Ndị Maya na amụma njedebe nke ụwa - Mexico
Kedu ihe ndị Mayan ga-akụziri anyị gbasara njedebe nke ụwa? N’oge gara aga, n’afọ 2012, ọtụtụ mmadụ nụrụ banyere ọgwụgwụ ụwa. E mekwara ka ọtụtụ ihe omimi dịrị gburugburu mmepeanya Mayan. Ka emechara, asịrị kwuru na dabere na kalenda Mayan, ụwa ga-agwụ…
GỤKWUO Ndị Maya na amụma njedebe nke ụwa - Mexico
Ogige Pilanesberg - foto safari na ihe nkuzi anụmanụ - South Africa
Ndewo nụ ụmụ nwoke, post a ga - abụ ngwakọta nke ndụmọdụ na agwa anụmanụ mụtara n’oge mbụ m mere njem na South Africa. ime foto foto safari safari. IHE…
GỤKWUO Ogige Pilanesberg - foto safari na ihe nkuzi anụmanụ - South Africa
Anyị gbara nwanyị Mexico ajụjụ ọnụ ma weta aro maka Corona Virus na Atụmatụ banyere Mexico! Ezutere m Érika n’oge nri abalị na Rio de Janeiro. O sonyekwara ndị otu anyị na-eme njem ma anyị na-eri otu tebụl. Érika chọrọ ịmata ka tebụl anyị ga-esi bụrụ nke mba ụwa. Anyị nwere ndị mmadụ ...
Kedụ ka ọ ga - esi nwee ụgbọ njem ọha na - akwụghị ụgwọ? - Estonia - Tallinn
Na njem mbụ anyị na Tallinn, isi obodo Estonia, mgbe anyị rutere n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, ọ tụrụ anyị n'anya site n'ọdụ ụgbọ elu na-adịghị ahụkebe. N'ezie ihe ọ dị ka ọ bụ na e mepụtara ya ka ọ bụrụ otu ọdụ ụgbọ elu kachasị mma ma dị mma ịnọ. M ekwupụta na n'oge m njem ole na ọdụ ụgbọelu yiri ka…
GỤKWUO Kedụ ka ọ ga - esi nwee ụgbọ njem ọha na - akwụghị ụgwọ? - Estonia - Tallinn
Ebe nkiri Gaborone - Botswana
Ihe ị ga-eme na Gaborone - Botswana Na njem mbụ m mere na Africa, ekpebiri m ịgafe ókè South Africa na Botswana. E kwuwerị, Brazil dịtụ anya site na mpaghara Africa. Yabụ ọ dị ka ezigbo echiche ịgafe oke ma hụ ma Botswana dị ka…
GỤKWUO Ebe nkiri Gaborone - Botswana
Kedụ ka anyị ga - esi merie agha ụwa nke atọ? Azịza ya nwere ike ịdịrị gị.
Otu esi eme ka otutu ndi njem bia merie World War III.
GỤKWUO Kedụ ka anyị ga - esi merie agha ụwa nke atọ? Azịza ya nwere ike ịdịrị gị.
Tupu m bido, ekwesịrị m ịsị na a gbara ajụjụ ọnụ a kpamkpam. Anyị enweghị oge iji chee echiche banyere edemede ma ọ bụ naanị iji ike mee ya. Na aro nke Lexiegh. Ọ chọrọ ihe ziri ezi! Zọ kachasị mma iji mezuo nke a ga - abụ ime ya otu a, iji ekwentị ịdekọ na…
Ndi Ndi Ngwunye Knights di?
Ezigbo akụkọ sitere na mpaghara ochie.
GỤKWUO Ndi Ndi Ngwunye Knights di?
Kedu ihe ị ga-eleta na Riga? Obodo nke jikọrọ ọhụrụ na ochie na ije - Latvia
Odo, tupu m kwuo maka Riga n’onwe ya, gịnị kpatara m jiri nọrọ ebe ahụ? N'ịchọ ịga leta mba niile nke ụwa, ma ọ bụ opekata mpe ọtụtụ n'ime ha, Latvia nọ n'etiti ụzọ, na etiti ụzọ ahụ Latvia. N'etiti Estonia na Lithuania.😎 O juru m anya na njem nke…
GỤKWUO Kedu ihe ị ga-eleta na Riga? Obodo nke jikọrọ ọhụrụ na ochie na ije - Latvia
1- Gini mere m ji akwado Banco Inter? Ọ bụrụ na ịchọrọ akaụntụ nyocha nke Brazil, maka ebumnuche ọ bụla, ọ bụ maka na ị bi ebe a na Brazil, ma ọ bụ maka ọrụ, ma ọ bụ ị bịa ịmụ akwụkwọ, ma ọ bụ n'ihi njem nleta, ma ọ bụ iziga ma ọ bụ nata ego si mba ọzọ aro bụ na…
GỤKWUO Inter Bank
Luxembourg - Grand Duchy ikpeazụ nke ụwa
Luxembourg bụ obere mba na Europe, agbata obi France, Belgium na Germany. Gịnịkwa mere o ji baa uru ileta? N'ihi na ọ bụ ya bụ onye ikpeazụ Grand Duchy n'ụwa. Ma inwere ike juo onwe gi: gini bu nnukwu Duchy? Azịza dị mfe: ọ bụ mba, nke kama ịbụ onye isi ala a họpụtara ahọpụta, nwere nnukwu eze nke who
GỤKWUO Luxembourg - Grand Duchy ikpeazụ nke ụwa
Isi nke asatọ
Dịka m kwere nkwa na post ikpeazụ, m ga-ekwu maka kọntinenti nke asatọ. Ebeekwa ka kọntinenti asatọ dị? Ọ na-adị n’elu isi anyị. Na Space, na Earth Orbit! Na nchọta maka onyonyo satịlaịtị iji mara etu ọkụ dị na Brazil n'ozuzu. Nke ahụ bụ, gụnyere isi ihe ndị dị na Brazil ...
GỤKWUO Isi nke asatọ
Gịnị ma ọ bụrụ na m gwa gị na na ụwa anyị (mmadụ) enwetala kọntinent nke asaa? Ee, akụkọ ahụ dị mma, mana ọ dị mwute na ọ bụghị. N'ihi ihe mkpofu nke a kpakọbara n'oké osimiri nke ebili mmiri na-ebugharị ma na-etinye n'otu ebe na Oke Osimiri Pasifik n'etiti California na Hawaii ...
GỤKWUO Isi nke asaa
Ndụmọdụ gbasara ihe ị ga-eme na Barcelona
Barcelona dị mma maka ndị na-amasị ihe owuwu na-adịghị ahụkebe. The façades na ime nke njem nleta tụrụ depụtara n'okpuru na-eweta a pụrụ iche na nke square ahụmahụ ọ bụla esenowo. Ọ bụrụ na nke a bụ njem izizi gị gaa Barcelona, ​​soro ndụmọdụ ndị a: 1- Asụsụ: Ihe mbụ ị ga - achọpụta ...
GỤKWUO Ndụmọdụ gbasara ihe ị ga-eme na Barcelona
Ụtụ maka Notre-Dame
Amaghị m otu esi amalite post a, yabụ m ga-agwa gị ihe bụ echiche ya. Ọ na-asọpụrụ katidral Notre-Dame, nke a gbara ọkụ na Eprel 15, 04. Ọ bụ ihe kpaliri ọtụtụ mmadụ, na mgbakwunye na ọgba aghara na mwute nke eziokwu ahụ na-eweta. Maka m ndị na-eme njem na France na ndị enyi m…
GỤKWUO Ụtụ maka Notre-Dame
Kedu ka esi aga Paris?
Dị ka ekwere na ọkwa gara aga, oge ọzọ m gara ikwu maka Paris m ga-ewetara gị ụfọdụ ndụmọdụ ebe a. (The post ebe m na-ekwe nkwa a bụ nke a) Ọ dị mma mgbe ahụ ọ bụ oge iji mezuo nkwa ahụ. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịkọwapụta mmalite gị ...
GỤKWUO Kedu ka esi aga Paris?
Na ọkwa gara aga anyị gbara ajụjụ ọnụ na nwanyị Peruvian na onye njem nleta Brazil banyere Peru. (Can nwere ike ịnweta nnukwu mkparịta ụka a site na ịpị ebe a). N'ihi ya, ekpebiri m iweta ọchịchọ ịmata banyere tea coca Peruvian. Coca tea Ihe mbu choro bu na a na ewere tea tea n’ebe ahu ...
GỤKWUO A ga-amachibido caffeine na ọgwụ cocaine?
Gini mere French ji ekpuchi ihu ha mgbe ị na-asụ Bekee ma gịnị jikọrọ nke a na ndị Brazil?
Taa, anyị ga-ekwu maka asụsụ dị iche iche na ihe kpatara French ji ete imi ha mgbe anyị na ha na-asụ Bekee. Ọfọn, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile m kwurịtara banyere France, ndị nọrọkwa ebe ahụ, kwuru ihe abụọ mgbe niile: Na e nwere ebe mara mma, nke magburu onwe ya. Na ndị French na-ete ihu ha ma ọ bụrụ na ị ...
GỤKWUO Gini mere French ji ekpuchi ihu ha mgbe ị na-asụ Bekee ma gịnị jikọrọ nke a na ndị Brazil?
Niagara Falls vs Foz do Iguaçu Nso idi mmiri kacha mma?
Ndewo ụmụ okorobịa na taa anyị ga-ekwu maka nsụda mmiri! Na abụọ n'ime ndị ukwu. Kedu nke ka mma: Niagara Falls ma ọ bụ Foz do Iguaçu? Kedu nke kachasị n'etiti ha? Tupu anyị amalite, ọ ga-amasị m ime ka o doo anya na nke a bụ nyocha emere na data gọọmentị achọtara m. Ajuju nke abuo bu…
GỤKWUO Niagara Falls vs Foz do Iguaçu Nso idi mmiri kacha mma?
Tinye email ịdenye aha na blog a ma nata akwụkwọ ọhụrụ.
site Atụmatụ Okwu Okwu
White ipes na 07th Septemba ... Daalụ maka inye anyị ozi a dị mkpa nke udo.
N'oge ihe isi ike dị ka # ipê na ọbụlagodi #dra #flowers na-adọta mmiri na ala olulu mmiri site na mgbọrọgwụ ya siri ike iji debe onwe ya ọtọ. Ọbụna ọ na-ese onyinyo maka ndị na-anaghị echetakwa ha mgbe ha na-adịghị okooko. Daalụ ipes. #che banyere ya
Lelee anyị #lake nke # nnụnụ na-eme # ihe ịga nke ọma
Jikọọ 226 ọzọ ndị debanyere aha
Na-adọnye okwu ...